Iindlela ezi-4 zeQhinga loLawulo lweNgcaciso yakho - okanye ukungabi nayo - lixesha lokuDlala, oovimba kunye neShishini | Martech Zone
Ungandinceda ndibeke le ntetho kunye? Intlanganiso yam iyure nje. Andisifumani isilayidi.
Esi sisilayidi esingalunganga.
$ #! * Leyo yeyona deck iphosakeleyo.
Isandi esiqhelekileyo? Ke awusebenzisi iqhinga lolawulo lwenkcazo esebenzayo. Kwaye, ngenxa yoko, uphulukana nexesha, izibonelelo kwaye, ngaphezulu kwako konke, ishishini. Ulawulo lwentetho luqinisekisa ukuba umyalezo olungileyo uxelwe kwelona xesha libalulekileyo- xa umntu othengisayo ethetha nomthengi. Yintoni eyenzekayo, okanye engadluliyo kuloo ntlanganiso ichaphazela ngqo umgca osezantsi. Kukuphumelela okanye ukuphulukana.
Ulawulo lwentetho ludlala ukuphumelela. Ngokwenkcazo, yindlela esesikweni yokudala, ukugcina, ukubonisa, ukwabelana, ukuhlaziya kunye nokulandela umkhondo zonke iifayile ezisetyenziselwa ukwenza intetho. Ukuziqhelanisa, ulawulo lwenkcazo luqinisekisa uphawu kunye nolawulo lomyalezo wentengiso, lonke elixa lisenza ukuba likhawuleze kwaye kube lula ukuThengisa ukwenza nokwabelana ngomxholo wentetho.
Isicwangciso esiliqili solawulo lwenkcazo-ntetho siya kukunceda ukuba uphephe ezi mpazamo ziqhelekileyo -zenza wonke umntu kwiqela lakho, kuyo yonke imisebenzi, avelise ngakumbi kwaye afezekise iinjongo zabo.
Thatha ukuba abantu abathengisayo bayayazi indawo yokufumana umxholo wabo. -Kukho kwi-S: Shayela kwezinye Intengiso-Inamagama ifolda, kwi-Sharepoint, okanye mhlawumbi ithunyelwe nge-imeyile eninzi, kunye nesibhengezo esikhulu. Ifayile iyangcwatywa kwinethiwekhi, kwindawo yokusebenza okanye kwi-Inbox, akukho nanye kuzo enezinto eziphambili zokukhangela ukusondeza kunye nokufumana isilayidi esinye kwisigidi. Akukho nanye inikezela nayiphi na into eluncedo ekwenzeni okanye ukwenza ngokwezifiso ifayile entsha yenjongo entsha yentlanganiso. Ulawulo lwentetho lubeka owona mxholo usexesheni kanye phambi komntu othengisayo. Iqinisekisa ukuthotyelwa komyalezo.
Thatha ukuba wonke umntu uyathobela, umxholo wexesha. - Kwaxelelwa wonke umntu, mhlawumbi nge-imeyile, ukutya okuxoxa, okanye kwintlanganiso yesimo, ukuba kukho inguqulelo entsha, ebhetele, evunyiweyo ngokusemthethweni. Ngelishwa, abantu zizidalwa ezinomkhwa. Kwaye umkhwa oqhelekileyo womntu othengisayo kukuthatha ifayile yezolo ehleli kwidesktop yakhe kwaye ayisebenzise kwakhona. Emva kwayo yonke loo nto, uyawazi lo mxholo, kwaye wawulungile kwintlanganiso yokugqibela. Isisombululo esifanelekileyo solawulo sokubonisa siza kwenza ukuba kube lula kuloo mntu ukuthengisa ukuba enze ipakethe entsha kwintlanganiso yakhe elandelayo, njengoko bekunokuba kukusebenzisa indawo endala ehleli kwidesktop yakhe. Igcina ixesha.
Ukunganxibelelani noThengiso. Ngelixa wonke umntu esebenzela injongo enye, ukuthengisa kunye nokuThengisa zizifundo ezahlukeneyo. Umntu othengisayo olungileyo uzama ukufezekisa inani labo, kwaye angenise ingeniso. Umthengisi olungileyo wakha ukulingana kwebranti ngemveliso yenkampani / yokunikezelwa kwenkonzo kunye nemiyalezo. Elinye lixesha elifutshane, elinye lide. Zombini zibalulekile kwimpumelelo yenkampani. Sebenzisa izinto zeshishini kwezentlalo, isisombululo solawulo lwenkcazo-ntetho siya kudibanisa imisebenzi yokuThengisa kunye neNtengiso, ukuze wonke umntu abelane ngolwazi ngokuzenzekelayo, ngexesha lokwenyani, kwaye ahlengahlengise ngokufanelekileyo. Yimpumelelo.
Ayiphathi inkcazo njengesixhobo kumxube wonxibelelwano. -
Abathengisi bachitha iibhiliyoni zeedola beyila i-logo efanelekileyo, beyila isikhundla, besenza iiwebhusayithi, iincwadana, iindawo zeTV kunye nezinye iintengiso kunye nezibambiso, kodwa intetho yentengiso yasemva kwengcinga. Betha ilogo kunye nemvelaphi entle kwitemplate yePowerPoint kwaye Yiya, Yiya, Yiya ... Thengisa! Into ethethwa ngumntu othengisayo, kwaye bayitsho njani, ngumahluko phakathi kokuphumelela kunye nokuphulukana neshishini. Umboniso wentengiso sisiqwenga sesibambiso; yinto yayo kumxube wonxibelelwano, kwaye akufuneki ukuba iphathwe njengengcamango emva. Ifanelwe ngakumbi kukuThengisa kunye nokuThengisa.
Ulawulo lwentetho luqinisekisa ukuba ezona zixhobo zibalaseleyo zenkampani zikwiingcebiso zeminwe yomntu wonke othengisayo, kwaye wonke umntu wentengiso ufumana umgca ngqo kwithagethi yabo. Imalunga nokwenza umyalezo olungileyo wokuthengisa, kunye nokuqinisekisa ukuba abantu abathengisayo banokuphinda bavelise kwaye bahlengahlengise oko kwiintlanganiso zabo, ngaphakathi kwemizuzu- hayi iiyure kwaye ngokuqinisekileyo hayi iintsuku. Ngokuphakamisa umboniso wentengiso kunye nenkqubo yokudala ezo ntetho kumxube wentengiso, inkampani iyaqhubeka nokusebenzisa utyalo-mali lwayo lokuthengisa, kwaye ilusebenzise ngqo kumgca osezantsi.
Qhuba yinkqubo yolawulo lwefayile enokuthi isebenzise ukuthengisa kunye nentengiso ukwenza, ukwabelana, kunye nokugcina umboniso kumbutho wakho wonke.
tags: ipower Pointintshumayeloulawulo lwentetho
5 Imilinganiselo yokuSebenza ngokuGqwesa